ERW (Electro-Resistance welding) Pipe Line - China Qingdao Haokun Machinery
Liyaphela Beveling Machine
Pipe End olwandisa
ERW (Electro-Resistance welding) Pipe Line
ERW (Electro-Resistance welding) Pipe Line Ngenxa kuphuhliso lwezoqoqosho olukhawulezileyo eTshayina, kukho ibango eliphezulu kwekhwalithi, iityhubhu ezinkulu ubukhulu ERW kuba ioli negesi zokuhamba, amanzi kunye nothungelwano lwemijelo zokuhamba kunye nolwakhiwo yoluntu namashishini. Ukuze banelise iimfuno zabaxhasi bethu, siye HAOKUN ERW line ethu enziwe ngumenzi imveliso Tube. TO-umhla, siye unikwa ubukhulu ERW16 enkulu ', ERW 20 ", ERW 24" kwiiklayenti zethu ezahlukeneyo. Thina nge ukuqaqambisa ityala apho ...
Ngenxa kuphuhliso lwezoqoqosho olukhawulezileyo eTshayina, kukho ibango eliphezulu kwekhwalithi, iityhubhu ubukhulu ERW enkulu kuba ioli negesi zokuhamba, amanzi kunye nothungelwano lwemijelo zokuhamba kunye nolwakhiwo yoluntu namashishini. Ukuze banelise iimfuno zabaxhasi bethu, siye HAOKUN ERW line ethu enziwe ngumenzi imveliso Tube. TO-umhla, siye unikwa ubukhulu ERW16 enkulu ', ERW 20 ", ERW 24" kwiiklayenti zethu ezahlukeneyo. Thina nge ukuqaqambisa ityala apho siye zinikwe i ERW 25 "Tube Mill ku Guangzhou Juyi Pipe Factory. Kulo Mill, siye kwakhona benze i Horizontal Loop Accumulator, ngesantya esiphezulu Ikhoyili Edge Milling kunye Curter Flying ukwandisa ikhono layo. Enye ERW 25 "Tube Mill kwakhona okwangoku ezinikwa ukuba Mozambique WBHO Company. Ukongeza kwezi zihlandlo, siye bahlangana data uphando zebanga intsimbi ERW 630 X 19.1 mm X80 kwithala lethu kuyilo. Sitsho ngengqiniseko ukuba esiyifumene karhulumente -of-ubugcisa ukwazi ukuba enobubanzi enkulu ERW Tube Mill.
Emva ukukhula nozilo koqoqosho Chinese, phezulu-grade, enobubanzi elikhulu aqhelelkileyo ingenamthungo ngqo nge welding, imibhobho ezisetyenziswa kakhulu kwiindawo ezifana zokuhamba petroleum, uthungelwano imibhobho ezidolophini kunye izakhiwo, bakruthana imfuno kubo, nto leyo idala amathuba ophuhliso entsha umgca pipe ezihlola yokuvelisa kunye nabenzi nezixhobo.
Kwiminyaka yakutshanje, ngokufunda nokugcina technologies umatshini ERW phambili ukusuka kwamanye amazwe, yenzelwe yaye liphuhlise imigca ezinkulu imveliso ubukhulu ERW kunye amalungelo ethu epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda yakhe. Ingakumbi ezinye iiyunithi olunye, ezifana ukulicudisa mqengqeleki, ziye nelungelo e-China. Ukuza kuthi ga ngoku, siye ugqibile ekuyileni imigca ezinkulu imveliso ukuvuleka ERW kwemigaqo: 16 "ERW, 20" ERW, 24 "ERW. Phakathi kwabo i "ERW, 24" okusila zemveliso ERW 20 zaye selekufakile ukusebenza; Kuba Guangzhou Juyi Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd, enye iseti epheleleyo 25 "ERW umgca imveliso loop tye. Speed ​​High Edge Milling Matshini ne amaplanga. Ukucanda Machine kunye Ukugqiba Area, kakade ukusebenza; iseti epheleleyo 25'ERW umgca ukuba ngaphandle WBHO eMzantsi Afrika sele phantsi kovavanyo.
Ukongeza, inkampani yethu Iyakwazi zonke iindlela ERW630x19.1mm yebanga intsimbi X80, kwaye sele livelise JCOE1420x32mm yebanga yentsimbi X80 umgca wemveliso ipipi welding.
Umhlube kulungiselelwa steel ingxenye
Uncoiling : uqhuba emigodini ezimbini ukwandisa kunye nemisebenzi yolawulo njengotsaleko hlengiso tyaba strip intsimbi
Kwiziphakamiso machine steel flattening : Nge 5 imiqulu zomsebenzi kuvulwa / ivaliwe ngokukhawuleza isilinda hydraulic.
Inkqubo esityeni ukuwelda kwi intloko nomsila iphela : MAG welding, CO2 isihlangu igesi.
Tye uyilo machine welding : ukusika Combined iintsimbi kunye.
Ua strip sentsimbi phambi iwelding : ukulinganisa ngokuzenzekelayo nokungqinelanisa indawo komcu ngentsimbi.
Accumulator Ukonakala : Ngaphandle ku ngaphakathi ngaphandle
Umhlube speed lweehagu : Ubuninzi 75m / min.
Ubude of line lothuli : Malunga 1000mm ngaphezu kolundi
Imo Production : Imveliso okuqhubekayo
Isantya umgca wemveliso : 12m / min ~ 25m / min.
Uhlobo Drive benqwanqwa engundoqo : roll ngasinye ngokwahlukeneyo iqhutywa ngu CNC AC-bume sokuquqa zokulawula isantya okanye ulawulo Isantya DC
Ndiyila mbono : Lungisa umgca onenombolo, phantsi indlela bokwakha
Ubude of line iziko : Malunga 1000mm ngaphezu (icandelo solinganiso) kunina
Uhlobo zokubumba : yokuhlala bokwakha
Ukubekwa kaloliwe lokuguba : PLC-control system isicwangciso ekhawulezileyo manual ngenkani setting
Ukulungiswa adlula lokuguba : PLC-alawulwa utshintsho esizenzekelayo hlengiso manual.
Zangaphakathi burr kokuphalwa : burr wangaphakathi mmeli ngokusebenzisa ring imela ukuba ifakelwe isixhobo ukuphumla okhethekileyo.
Engaphandle burr kokuphalwa : scrapers ezimbini burr bangaphandle omnye crimpers of burr engaphandle.
S izing ipipi : nqwelo isiphathi Zine zisetyenziselwa ukuvelisa ipipi setyhula.
Steel pipe eqondisa : Qinisa umbhobho sentsimbi ziintloko turkey kunye lokusila solinganiso.
Indlela zambona ezibhabhayo : CNC Double lokusila ukusika intloko flying wonqanyulwa-bomashini.
Okulandelayo: Ukonakala Pipe Mill
30inch Longitudinal kwamanzi Arc welding Steel Pipe Mill
30longitudinal kwamanzi Arc welding Steel Pipe Mill
762 Longitudinal kwamanzi Arc welding Steel Pipe Mill
Advanced Weld komphetho Heat Treatment
Erw Pipe Mill ukwenziwa
Erw Pipe Mill Abavelisi
Erw Production Pipe-Profile
Erw Tube Ukubumba Mill
Isefu Tube Making Machine
Longitudinal kwamanzi Arc Welding Pipe Machine
Longitudinal kwamanzi Arc Welding Pipe Mill
Pipe kokuyicheba Machine
Ingcinezelo Steel Pipe
Oku--Final welding Pipe Mill
Oku--Final welding Pipe Mill 100
Oku--Final welding Pipe Mill 100 Inch
Oku--Final welding Pipe Mill 1422
Oku--Final welding Pipe Mill 1620
Oku--Final welding Pipe Mill 1820
Oku--Final welding Pipe Mill 2032
Oku--Final welding Pipe Mill 2200
Oku--Final welding Pipe Mill 2540
Oku--Final welding Pipe Mill 56
Oku--Final welding Pipe Mill 56 Inch
Oku--Final welding Pipe Mill 64
Oku--Final welding Pipe Mill 64 Inch
Oku--Final welding Pipe Mill 72
Oku--Final welding Pipe Mill 72 Inch
Oku--Final welding Pipe Mill 80
Oku--Final welding Pipe Mill 80 Inch
Oku--Final welding Pipe Mill 86
Oku--Final welding Pipe Mill 86 Inch
Ukuveliswa Tube Line
Isetyenziswa Erw Pipe Mill
No. 20 Taishan Road, Industrial Zone Of Jiulong Town, Jiaozhou City, Qingdao, Shandong kwiPhondo, China